Ocean blue lattice design bedspread-HF29028, China Ocean lattice design latspice-HF29028 Mpanamboatra, mpamatsy, Factory - Zhejiang Rancho Santa Fe home textile Co., Ltd
HAZAVAN'NY hazavana sy hazavana –Ny farafara fandriana tsara tarehy dia manome lanja ny efitranonao. Ny fitaovana ao amin'ny efitrano fandriana dia azo ovaina: avadika ny fonon'ny fandriana ary mahazo vokany hafa sy mahatalanjona tanteraka. Ny stitching embossed haingon-trano dia manome endrika mahazatra tsy misy ezaka, avy hatrany. Ity farafara farafara faran'izay lafo vidy ity dia ny accent tonga lafatra amin'ny efitrano fandriana na amin'ny efitrano fandraisam-bahiny.
Vita amin'ny microfiber 100% malefaka sy malefaka miaraka amina landihazo nefa mameno landy, ity lamba fandriana ity dia hazavana kely azo ampiasaina amin'ny toetr'andro mafana kokoa fa maharitra ihany koa amin'ny alina mangatsiaka. Izy io dia azo soloina amin'ny masinina amin'ny rano mangatsiaka. Atsofohy amin'ny hafanana ambany. Namboarina haharitra ela be raha tazonina tsara. tsy mifikitra aminy ny loko fanoherana lamba sy volo biby. Ny fitaovana avo lenta dia ny pilina ary tsy mahazaka.
Cividini Spring amboradara fandriana-HF29024